Xukuumadda & Ganacsatada Muqdisho oo guddi u saaray xakameynta COVID-19 | Banaadir Times
HomeUncategorisedXukuumadda & Ganacsatada Muqdisho oo guddi u saaray xakameynta COVID-19
Xukuumadda & Ganacsatada Muqdisho oo guddi u saaray xakameynta COVID-19
Ra’iisul Wasaaraha xukumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo kulan la qaatay ganacsatada Soomaaliyeed ayaa kala hadlay in ay kaalintooda ka qaataan xakameynta iyo la tacaalidda cudurka Covid-19 ee dalka ku soo laba kacleeyay.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka xukumadda xilgaarsiinta Fowsiya Abiikar Nuur ayaa Warbixin dheer ka siiay Ganacsatada xaaladaha Cudurka Coronavirus, iyada oo sheegtay in xaalad halis ah uu kujiro dalka.
Qaar kamid ah Ganacsatada kulank ka qeyb gashay ayaa balan qaaday inay kaalintooda ka qaadan doonan xakameynta iyo la tacaalidda cudurka Covid-19 ee dalka ku soo laba kacleeyay.
Ra’iisul Wasaaraha xukumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo Ganacsatada Muqdisho ayaa ku heshiiyay in la sameeyo Guddi ka kooban 12 Ruux oo ah Afar uu Magacaabay Ra’iisul Wasaaraha iyo 8 Xubnood oo laga soo xulay Ganacsatada, kuwaas oo ka qeyb qaadan doona dadaalka loogu jiro xakameynta iyo la tacaalidda cudurka Covid-19.
Ugu dambeyn Ra’iisul Wasaaraha xukumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa ugu baaqay Ganacsatada Gobolka Banaadir in ay dadaalka kaalntooda ka qaatan, isla markaana Bulshada Soomaaliyeed ay caawiyaan.
Todobaadyadii la soo dhaafay ayaa waxaa kordhay dadka u dhimanaya iyo kuwa uu soo ridanayo cudurka Coronavirus guud ahaan dalka, waxaana Wasaaradda Caafimaadka ay shaacisay in ilaa iyo hadda ay diiwaangelisay 7,518.
Previous articleWiil Dhalinyaro ahaa oo lagu dilay Magaalada Beledweyne
Next articleXasan Sheekh oo dowladda uga digay in la carqaladeeyo banaanbaxa.